Guddoomiyaha Aqalka sare oo baaq nabadeed u diray Beelaha Walaalaha ah ee ku dirirsan Gobalka Sool | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Guddoomiyaha Aqalka sare oo baaq nabadeed u diray Beelaha Walaalaha ah ee...
Guddoomiyaha Aqalka sare oo baaq nabadeed u diray Beelaha Walaalaha ah ee ku dirirsan Gobalka Sool
Muqdisho (SNTV);- Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa baaq nabadeed u diray Beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada Dhumay, Dharkayngeenyo iyo Nawaaxigeeda,wuxuuna tacsi u diray eheladii ay dadkoodi ku geeriyoodeen dagaaladaasi.
Senator Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa sheegay in nasiib daro ay tahay in xilligan la daadiyo dhiig shacab badalkii nabada laga shaqeyn lahaa,wuxuuna dhinacyada dirirta u dhaxeyso ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka u joojiyaan,islamarkaana wax walba ku xaliyaan miiska wada hadalka.
“ Waxaan tacsi u dirayaa Ehalada dadkii ku dhammaaday deegaanka Dhumay,waa nasiib daro in xilligan dagaal sokeeye oo dad walaalo ah u dhaxeeyo soo cusboonaado,waxaan u soo jeedinayaan Siyaasiyiinta iyo Odayaasha dhaqanka iney u istaagaan sidii dagaaladaasi lagu joojin lahaa,” ayuu yiri Guddoomiyaha Aqalka sare oo hadalkaan ka jeediyay shirka Guud ee Golaha Aqalka sare oo maanta ka dhacay xarunta Golaha.
Dowladda Federaalku ayaa waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan umadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo horumarka iyo midnimada lana ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida oo aasaas u ah guud ahaan horumarka shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleCiidamada Amniga oo gacanta ku dhigay Xubin ka tirsan argagixisada Al shabaab oo Khabiir ku ah Qaraxyada
Next articleGudoomiye Tuulax: Suuqa Bakaaraha waa inay noqotaa goob burcadda ka caagan oo ganacsatada nabadgelyo ku shaqeystaan